Akụkọ - Otu esi akpọsa usoro gị nke azụmahịa
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji mgbasa ozi dị ala na-akpọsa ụzọ ha si azụ ahịa. Companieslọ ọrụ ndị a adịghị ka ha achọpụta mmetụta dị oke ụfụ nke ụdị akara ngosi a nwere ike inwe.
Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya nke Dr. James J. Kellaris nke Lindner College of Business na Mahadum nke Cincinnati na-enyere aka ịghọta mkpa nke akara ngosi dị elu. Ihe nchoputa nke ihe omumu a gosiputara ndi ahia otutu oge. Nghọta ahụ dị mma na-edugakarị na mkpebi ndị ahịa ndị ọzọ.
Dịka ọmụmaatụ, njirimara nke a na-edugakarị na mkpebi onye ahịa ịbanye ma ọ bụ ịbanye na azụmaahịa nke izizi. Iwulite ndi ahia ahia ugbua bu ihe di oke egwu maka ahia ahia. Nnukwu ọmụmụ mba a na-egosi na akara ngosi dị elu nwere ike inyere aka na ebumnuche ahụ.
N'ebe a, "akara ngosi" apụtaghị naanị ọnọdụ anụ ahụ nke akara ngosi azụmahịa. O nwekwara ike ịpụta mkpokọta akara ngosi na ịba uru. Dịka ọmụmaatụ, ọmụmụ ihe ahụ na-ekwu na legibility bụ mpaghara ọzọ nke nghọta njirimara nke ndị na-azụ ahịa, na 81.5% nke ndị mmadụ na-akọ na iwe na iwe mgbe ederede akara aka pere mpe ịgụ.
Tụkwasị na nke a, ịdị mma nwekwara ike ịpụta ịdị mma nke akara ngosi akara ngosi maka ụdị azụmaahịa ahụ. 85.7% nke ndị zara ajụjụ a kwuru na "akara ngosi nwere ike ime ka mmadụ mara ma ọ bụ omume azụmaahịa."
Iji tụlee akụkụ nke ọzọ nke data ọmụmụ a, enwere ike ịtụle akara ngosi dị ala nke usoro mgbasa ozi nke ụlọ ọrụ na-azụghị ahịa. Ọmụmụ ihe ahụ kwuru na 35.8% nke ndị na-azụ ahịa abanyela na ụlọ ahịa a na-amaghị ama dabere na ogo nke akara ya. Ọ bụrụ na azụmaahịa tufuo ọkara nke ọnụọgụ ahịa ndị ahịa ọhụụ ọhụụ n'ihi akara ngosi dị ala, ego ole ka nke ahụ na-atụgharị na uru ahịa furu efu? Site na nke ahụ, enwere ike iwere akara ngosi dị ala dị ka ụzọ dị ngwa iji nwee ego.
Kedu onye chere na azụmaahịa nwere ike kpọsaa n'ụzọ ọ bụla na azụmaahịa ya? Echiche niile dị ka ihe agaghị ekwe omume, mana nyocha ụlọ ọrụ ugbu a na-atụ aro na ọ nwere ike ime na akara ngosi dị ala.
Ezigbo akara ngosi dị n'okpuru: